ओली नेकपामा सुवास नेम्वाङको परिवारवाद स्थापित, क–कसलाई दिलाए सरकारी पद ? - Sankalpa Khabar
ओली नेकपामा सुवास नेम्वाङको परिवारवाद स्थापित, क–कसलाई दिलाए सरकारी पद ?
काठमाडौं । नेकपा ओली समूहमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ चर्चित राजनीतिक खेलाडी मानिन्छन् । राजनीतिमा आउनुअघिसम्म अदालतमा वकालत गर्ने नेम्वाङलाई नेता बनाएकै माधवकुमार नेपालले हो । तर, अहिले तिनै नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका दह्रो सारथी बनेका छन् ।
पूर्वएमालेमा परिवारवाद स्थापित गर्नेमा शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेलपछि सुवासचन्द्र नेम्वाङ अग्रपंक्तिमा पर्छन । उनले सरकारी र राजनीतिक नियुक्तिमा परिवारवादको रेकर्ड नै राखेका छन् ।
२०५१ को मनमोहन अधिकारीको सरकारमा नेम्वाङलाई कानुन राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । त्यतिबेला राज्यमन्त्री न्यायपरिषद बैठकमा सहभागी हुन नपाउने भएपछि तुरुन्तै फुलमन्त्री बनाइएको थियो । नेम्वाङलाई मन्त्री बनाउने माधव नेपाल नै थिए ।
नेम्बाङकी कान्छी श्रीमती विशाल नेम्बाङको फुपू साईनोकै कारण ताप्लेजुङकी उर्मिला थेवेलाई हाल केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ। उनका श्रीमान भुपेन्द्र थेवेलाई संविधानसभा सदस्य बनाए ।
नेम्वाङको परिवारभित्रैबाट झन्डै एक दर्जनले राजनीतिक नियुक्ति र अवसर पाएका छन् । नेम्वाङकी कान्छी सानिमा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन् । उनी यसअघि कानुनमन्त्री र उपसभामुख थिइन् ।
सुवास नेम्वाङका साइँला काकाका छोरा बसन्त नेम्वाङ ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छन् । बसन्तकी श्रीमती भूमिका सुब्बालाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सेन्सर बोर्डको सदस्य हुँदै प्राज्ञ बनाइएको छ ।
नेम्वाङका कान्छा मामा बिजय सुब्बा पटक–पटक सांसद भए । उनी अशोक राईहरुको संघीय समाजवादी पार्टीबाट एमालेमा आउनासाथ सांसद पाउने भाग्यमानी हुन् ।
नेम्वाङले आजीवन सीपी मैनालीको माले पार्टीमा आवद्ध भाइ अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङलाई एमालेसँग एकता गराउने भनी ल्याएर समानुपातिक सांसद बनाए । अइन्द्रसुन्दरलाई सीपीको पार्टीमा सांसद हुने अवस्था हुन्जेल त्यतै राखे ।
नेम्वाङकी बहिनी प्रमिला देवान चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठन (न्याम्स) को रजिस्ट्रार छिन् । नेम्वाङले फुपूकी छोरी होमकुमारी सावाँलाई १ नम्बर प्रदेशको समानुपातिक सांसद बनाए ।
नेम्वाङले भाइ सुरेश नेम्वाङलाई इलाम नगरपालिकाको उपमेयर उम्मेदवार बनाए। सुवाष नेम्बाङकी कान्छी श्रीमती विशाल नेम्बाङको फुपू साईनोकै कारण ताप्लेजुङकी उर्मिला थेवेलाई हाल केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ। उनका श्रीमान भुपेन्द्र थेवेलाई संविधानसभा सदस्य बनाए । उर्मिला थेवे सिरिजंगा गाउँपालिका सिनामकी वडाध्यक्ष पनि हुन्।
आफ्ना १६ सांसद एमाले प्रवेश गर्दा पनि प्रचण्डले किन…
३१ चैत्र ०९:३७
ओलीको निम्तो दाहालबाट अस्वीकृतः बालुवाटार होइन, सिंहदरबारमा भेटौं
४ बैशाख ०६:५८